Liban Abdi iyo Captan Mo oo min 2 gool u kala dhaliyay kooxooda - NorSom News
Ciyaaryahanada soomaalida ah ee ka ciyaara horyaalada heerarka 1-aad iyo 2-aad ee kubada cagta dalkan Norway, ayaa sifiican uga dhex-muuqdo kooxaha ay u saftaan ee horyaaladaas. Liibaan Cabdi oo weerarka uga ciyaara kooxda heerka koowaad ee Haugesund ayaa goolkiisii labaad ee xili ciyaareedkan, shaley u dhaliyay kooxda Haugesund. Wuxuuna dhaliyay goolka kaliya oo Haugesund ay la timid, kulankan oo 3-1 ay uga badisay kooxda Brann ee ka dhisan magaalada Bergen.
Liibaan ayaa sidoo kale isbuucii hore gool u dhaliyay kooxda Haugesund, goolkaas oo kamid ahaa 2 gool oo ay Haugesund uga badisay kooxda Lillestrøm. Liibaan iyo Haugesund ayaa guuldaradii shaley kadib hada soo galay kaalinta 7-aad ee horyaalka heerka koowaad ee dalkan Norway.
Captan Mo iyo Tromsdalen:
Mohamed Ahmed(Mo) oo ah captanka kooxda heerka 2-aad eeTromsdalen, ayaa shaley goolkiisii labaad ee xili ciyaareedkan u dhaliyay kooxdaas. Wuxuuna ku guuleystay ciyaaryahanka ciyaarta(Man of the match).
Tromsdalen oo sanadkan kusoo biirtay horyaalka heerka 2-aad, ayaa hada kujirto kaalinta 6-aad. Halka ka daawo goolkii shaley ee Mo
Previous articleDenmark: Xisbiga D.F oo raba in xijaab-xirashada laga mamnuuco dadka ka shaqeeyo xarumaha dowlada
Next articleGanacsato soomaali ah oo shaley shirkad cusub oo isgaarsiineed kusoo bandhigay magaalada Oslo